05 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-04T11:09:56+00:00 2018-10-05T00:03:33+00:00 0 Views
MAKADII? henyu? Ndiri murume ane makore 40 uye ndinotsvagawo mukadzi ane mwana mumwe. Nhare yangu 0772 208 068.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Nhare yangu 0783 804 317.
Ndinodawo mudzimai anoda musha, ndine makore 54 uye ndiri HIV positive. Vandiri kuwana matsotsi anoda mari chete. Vari pachokwadi ndibatei pa
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 24 ekuberekwa ndotsvagawo mukomana wekurooriwa naye ane makore 30 ane mazirudo. Nhare yangu 0779 397 692.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mukadzi ane makore 23 nevana 2 uye ndiri HIV+ asi handiratidziki. Ndotsvagawo murume ari pachokwadi ane vana 2 kana 1 asingataridziki ane makore 30 – 35. Ngaave ari pachokwadi, anotya Mwari uye anoshanda. Andida anondibata chero nguva pa0716 128 258.
Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana 2, ndiri pamushonga uye ndinotsvakawo murume ari pamushonga seni akavimbika. Anondida tinotaura zvizhinji, nhare yangu 0774 629 820.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 3, ndotsvagawo murume ari pachokwadi asi matsotsi kwete. Nhamba dzangu 0775 991 833.
Makadii veKwayedza ini ndakambonyorera ndichitsvaga wokuroora handisati ndawana andinoda. Ndine makore 26, ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 23 asingarware, akanaka seni. Ini ndinogara chinhoyi kwete mutown. Ngaave pachokwadi, masms ndotambira. Zita rangu ndonzi Passmore, munondibata pa0713 260 570.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 35 ekuzvarwa. Ndotsvakavo mukadzi ane makore 20 kusvika 25 wekuroora. Nhare dzangu 0713 602 316. Ndingafara chose ndikawana akanaka ari pachokwadi, ndatenda.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndodawo musikana ane makore 25, zvakawanda tozotaurirana taonana. Andida ngaandbate pa0779 491 105.
Makadini? Ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 25/34, ini ndine mwana wangu 1. Andifarira anondibata pa0715 814 465.
Ndiri murume ane makore 42 nevana 2 ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 35 kusvika 40 ane vana uye ari pamushonga. Zvakawanda tozotaura, anoda ngaandibate pa0773 894 763.
Makadii? Ndiri murume ane makore 43 nevana vatatu ndotsvaga mukadzi ane makore 35 zvichikwira asiri pamushonga. Andifarira ngaandibate pa0778 331 668.
Makadini? Ndiri mukomana ane makore 23, ndotsvagawo musikana ane makore 22 zvichidzika. Andifarira ngaandibate pa0782 671 530.
Ndotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye, ndine makore 46 uye handina mwana. Ndobatika pa0778 932 902.
Makadiyi veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 24, ndodawo murume ane makore 27 – 34 anoshanda uye ane mwana wakewo 1 kana 2. Ngaave ane kumushawo asi matsotsi kwete. Nhare yangu 0782 793 784.
Ndanzwa nekunyorera musingandishambadzewo. Ini ndiri mukomana, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 30. Andida ndibate pa0777 792 654.
Ndiri mukomana ane makore 24 ekuberekwa, ndinodawo musikana. Ndiri muHarare kana aripo ngaandibate pa0774 180 674.
Makasimba here veKwayedza? Kuno kuri bhoo, ndiri kuda musikana ane makore 20 kusvika 30. Ndine makore 35, ndiri kuWaterfalls, muHarare. Vandifarira ndibatei pa0713 927 410.
Makadii? Ndiri mukomana, ndinotsvagawo musikana anoda zvemba ane makore 21 kusvika 23. Andifarira ngaandibate pa0782 384 857, ndiri kwaRusape.
Ndiri mudzimai ane makore 30 nemwana 1, ndiri pamushonga uye ndodawo murume ane makoe 34 kusvika 45 anodawo zvandiri. Ndoda ari pachokwadi anoda zvekuroora. Nhare yangu 0783 560 004.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 32 nemwana 1 uye ndotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 50 ari pachokwadi. Ngaave ari pamushonga asingaratidze, ndiri muHarare. Nhare yangu 0734 766 326.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20 ndinoshanda, anondida anondibata pa0717 052 756 asi vakadzi vevamwe kwete. Ndinoda ane makore 18 kusvika 19.
Ndiri murume ane makore 40, ndotsvaga mukadzi wekuroora kubva pamakore 28 kusvika 35. Andida ngaandifonere pa0776 027 776.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 45 uye ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye ari negative. Ndinobatika pa0771 165 554.
Makadii? Ndiri murume ane makore 32 nemwana 1, ndinodawo mukadzi ane makore 28 – 21. Ndinoshanda, anoda ndibatei pa0778 429 604.
Makadii veKwayedza? Ndanyorera kakawanda ndine makore 30, handisi pamushonga uye ndoda musikana kana ane mwana 1. Ngaave ane makore 18 – 27 akanaka, anoda imba. Andifarira nhamba dzangu 0784 799 803.
VeKwayedza ndiri mukomana ane makore 23 ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore18 – 22. Ave kuda zvemba ngaandibate pa0717 791 961.
Ndiri musikana ane makore 22, ndotsvaga mukomana anoshanda muHurumende ane makore 27 – 30 kunyanya musoja kana mupurisa. Ndinobatika pa0773 391 826.
Kwayedza makadii? Ndinotsvagawo murume wokuvaka naye imba anoshanda nekuti ini ndiri teacher. Ndine makore 19 uye ndinodwo ane makore 27 – 18. Nhare yangu 0784 268 260.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvaka musikana akavimbika anonamata seniwo.
Andida anondibata pa0779 620 313.
Makadii? Ndiri murume ane makore 45 nevana 4, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora munamati anozviisa pasi pemurume asiri pamushonga. Nhamba dzangu 0778 829 076.
Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 27 – 30 ari mugari wekuBulawayo. Ari serious ndibate pa0715 589 213.
Ini ndiri murimi ndoda mudzimai ari pabasa. Vanoda fonai pa0772 668 367.
Makadii? Ndiri murume ane makore 28 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora, ngaave ane makore 20 – 26 ane mwana mumwe chete kana asina. Ndinobatika pa0779 775 537.
Ndiri mukadzi ane makore 34, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Andifarira ngaandibate pa0784 030 275.
Makadii veKwayedza? Ndinoda musikana ane makore 18 kusvika 19 chete. Nhare yangu 0783 846 014.
Makadii? Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora, ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa. Andifarira anondibata pa0783 836 077.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana 1. Ndotsvagawo murume ari pachokwadi asiri kumaruwa. Zvakawanda totaura pa0785 332 404.
Ndiri murume ane makore 40 okuberekwa nevana vaviri, ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 25 kusvika 35 ane vana vaviri kana mumwe chete. Ngaave ari pamushonga seni asingaratidze kurwara, anoda zveimba akavimbika asi vakadzi vevanhu kwete. Akasununguka nhare yangu 0774 627 240, sms kana kufona.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mudzimai wekurorora ari negative. Ada anondibata pa0783 010 466.
Ndiri musikana ane makore 20, ndinotsvagawo mukomana wekushamwaridzana naye asiri pamushonga nekuti ini handisi. Ndoda ane makore 20 – 26. Nhare yangu 0734 572 911.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35. Ndinotsvagawo mukadzi anoda zveimba wemuChitungwiza ane makore 25 – 28 ane mwana 1 kana asina. Nhamba yangu 0783 577 236.
Makadiyi veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvakawo musikana wekufambidzana naye ane makore 18 kusvika 24.
Ngaave ari pachokwadi asiri pamushonga. Ndinoshanda basa repamusoro muHarare uye ndakarongeka saka ndodawo akarongeka, akanaka asi vakadzi vevanhu kwete. Andifarira ngaandibate pa0784 508 400.